ဘာကြောင့်ဂျမေကာ အမေရိကန်သို့“ ခရီးမသွားပါနဲ့” အကြံပေးချက်ကိုတုံ့ပြန်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » ဂျမေကာသတင်းထူးများ » ဘာကြောင့်ဂျမေကာ အမေရိကန်သို့“ ခရီးမသွားပါနဲ့” အကြံပေးချက်ကိုတုံ့ပြန်ပါ
လေကြောင်းလိုင်း • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • အစိုးရသတင်းများ • ဂျမေကာသတင်းထူးများ • သတင်း • လူပုဂၢဳိလ္မ်ား • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ
ဂျမေကာစီးပွားရေးသည်ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်သိသိသာသာမူတည်သည်။ အဆင့် ၄ ခရီးသွားသတိပေးချက်များကိုအမေရိကန်ကထုတ်ပြန်ခြင်းသည်ကျွန်းနိုင်ငံအတွက်ကြီးမားသောစိတ်ပျက်စရာနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အများစုသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏သာယာဝပြောမှုအပေါ်မူတည်သည်၊ အမေရိကန်များသည်သူတို့၏ဧည့်သည်အများစုဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် CDC နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဂျမေကာအတွက်အဆင့် ၄ ခရီးသွားအကြံပေးအဖွဲ့ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆင့် ၄ အကြံပေးသည်ကွင်းဆက်တွင်အမြင့်ဆုံးအကြံပေးမှုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်များအတွက်“ ခရီးမသွားပါနှင့်” ဟုဆိုလိုသည်။
ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးကဒီသတိပေးချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် eTurboNews ယနေ့။
ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီး၊ Edmund Bartlett သည်ဂျမေကာကိုဆန့်ကျင်သည့်“ ခရီးမထွက်ပါနှင့်” ဟူသောအမေရိကန်မှထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဤကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဂျမေကာသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ခရီးသွားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ၎င်း၏တစ်သန်းလာရောက်လည်ပတ်သောဧည့်သည်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးကျွန်း၏ခရီးသွားထုတ်ကုန် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ ဦး ရေတစ်ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသော Jamaica's Resilient Corridors ကိုသိရှိခြင်းဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်အတွင်း COVID-2020 ကူးစက်မှုနှုန်းသည်တစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ across တစ်လျှောက်ရှိအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ခိုင်မာသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဤပရိုတိုကောများသည် ၂၀၂၀ ဇွန်လတွင်လုံခြုံစွာပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ပြုသောကမ္ဘာ့ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကောင်စီ၏ Safe Travels အသိအမှတ်ပြုမှုကိုပထမဆုံးလက်ခံရရှိသူများထဲမှဖြစ်သည်။
Jamaican တိုင်းနှင့်နိုင်ငံသို့လာရောက်လည်ပတ်သူတိုင်း၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်ကာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဗဟိုဌာန (CDC) မှအဆင့် ၄ သတ်မှတ်ချက်သည်တိုတောင်းသည်။
ဂျမေကာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကာရစ်ဘီယံညီအစ်ကိုများအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၇၇ နိုင်ငံတွင်အဆင့် ၄ သတ်မှတ်ခြင်းကိုခံရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကြံ့ခိုင်စင်္ကြံများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဆက်လက်သယ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
အမေရိကန်သည်ခရီးသွားအဆင့်မှီကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံများသို့အဆင့် ၄ ခရီးသွားသတိပေးချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ခရီးမသွားရန်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်သောအခါအမေရိကန်အစိုးရသည် COVID ကူးစက်မှုအန္တရာယ်နှင့်ကြုံလာလျှင် Jamaica သို့သွားရန်မည်မျှပိုလုံခြုံသည်ကိုယနေ့ချန်ထားခဲ့သည်။
ဂျမေကာခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး Hon ။ Edmund Bartlett သည်သူ၏တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ရုံသာမကသူ၏ဖန်တီးမှုနှင့်လည်းမသက်ဆိုင်ပါ Global Tourism Resilience and Crisis Center၊ Jamaica သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အကျပ်အတည်းကြုံလာသောအခါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဦး ဆောင်နေသည်။
အဆိုပါ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ (CDC) တစ် ဦး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အဆင့် ၄ ခရီးသွားကျန်းမာရေး COVID-19 ကြောင့်တိုင်းပြည်၌ COVID-19 အလွန်မြင့်မားသောအဆင့်ကိုညွှန်ပြသည်။ သင်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အစုံထိုးပြီးလျှင်ရောဂါလက္ခဏာပြနိုင်ခြေနှင့်ပြင်းထန်သောလက္ခဏာများဖြစ်လာနိုင်ခြေပိုနည်းနိုင်ပါသည် FDA ခွင့်ပြုချက်ရကာကွယ်ဆေးမရ။ မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးမဆိုမစီစဉ်မီ CDC ၏တိကျသောအကြံပြုချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ ကာကွယ်ဆေးထိုး နှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုး ခရီးသွားများ။ သံရုံးကိုသွားပါ COVID-19 စာမျက်နှာ Jamaica ရှိ COVID-19 အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
Kingston ၏အောက်ပါစာရင်းများ ရာဇဝတ်မှု.
Montego Bay ၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဧရိယာများကြောင့်ဖြစ်သည် ရာဇဝတ်မှု.
နိုင်ငံအကျဉ်းချုပ် အိမ်တွင်းကျူးကျော်မှု၊ လက်နက်ကိုင်လုယက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်လူသတ်မှုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်ရာဇ ၀ တ်မှုများသည်အဖြစ်များပါသည်။ အားလုံးပါဝင်တဲ့အပန်းဖြေစခန်းများအပါအ ၀ င်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဆိုးရွားသောရာဇ ၀ တ်မှုများအားထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ရန်ဒေသခံရဲများသည်အရင်းအမြစ်များအားနည်းနေသည်။ ကျွန်းပေါ်ရှိအရေးပေါ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကွဲပြားသည်၊ တုံ့ပြန်မှုအချိန်များသည်အမေရိကန်စံနှုန်းများနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ အမေရိကန်အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများအားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေရာများသို့အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားများအသုံးပြုခြင်းနှင့် Kingston သတ်မှတ်ထားသောနေရာများအပြင်ဘက်သို့ညဘက်ခရီးသွားခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။
အမေရိကန်သည် Bahamas အပါအ ၀ င်အခြားကာရစ်ဘီယံအိမ်နီးချင်းများအားအလားတူသတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။